ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဘားအံ - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဘားအံ - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့မှ မိုင်ခန့်အကွာ၊ ဘားကပ်စံပြ ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာ အ ..
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့မှ မိုင်ခန့်အကွာ၊ ဘားကပ်စံပြ ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှာ ဧက ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ် အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဘားအံ အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဘားအံမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဘားအံမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။